Cosafa delivers the bad news - NewsDay Zimbabwe
HomeSportSoccerCosafa delivers the bad news
Cosafa delivers the bad news
AFTER months of trying to source sponsorship for the 2014 edition of the Cosafa Senior Challenge, the regional football body has confirmed its failure and the final cancellation of this year’s instalment.
The tournament, which only made a return last year after four years in the doldrums and was hosted and won by Zambia after beating Zimbabwe 2-0 in the final at the Levy Mwanawasa Stadium, was expected to be held in Botswana next month.
Zimbabwe were the initial hosts, but with no government guarantees, Botswana was selected, but after hosting the Africa Youth Games in May, it could have been tough to find a headline sponsor.
Zimbabwe will also be hosting the Africa Union Region 5 Games in Bulawayo in December.
In a statement yesterday, Cosafa said: “The Council of Southern African Football Associations (Cosafa) regrets to announce that despite best efforts, the 2014 Cosafa Cup will not take place this year.
Cosafa president Suketu Patel said they were now working on securing a sponsor for next year’s edition.